‘क्लीन स्वीप’ हुनबाट जोगिएको एमाले : अब राष्ट्रिय सभामा कसको कति सीट ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
‘क्लीन स्वीप’ हुनबाट जोगिएको एमाले : अब राष्ट्रिय सभामा कसको कति सीट ?
काठमाडौं, १२ माघ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेलाई ‘क्लीन स्वीप’ गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको योजना विफल भएको छ । निर्वाचनमा एमालेले राष्ट्रिय सभाबाट ७ सीट गुमाएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका उम्मेदवार सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएसँगै गठबन्धनको ‘क्लीन स्वीप’ योजना विफल भएको हो ।निर्वाचन भएका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पराजित भएको एमालेले १ नम्बर प्रदेशमा भने गठबन्धनको मत तान्न सफल भयो ।राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेपछि निर्वाचन भएको हो । उनीहरूको कार्यकाल फागुन २१ गते सकिँदैछ । त्यसबाहेक राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका विज्ञ सदस्य रामनारायण बिडारीको पनि ४ वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ ।
बुधवारको निर्वाचनमा ७ प्रदेशमा ७ महिला, ३ दलित, २ अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक र ७ अन्य क्लस्टर गरी १९ सदस्यका लागि ४३ जना उम्मेदवार बनेका थिए । १९ सीटमा गठबन्धनले १८ सीट जितेको छ ।राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । सभाका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ तर पहिलो १ कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट सदस्यको पदावधि निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये पहिला २ वर्षमै १९ जनाको पदावधि सकिएर निर्वाचन भइसकेको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजन हुँदा पनि एमाले २४ सीटसहित राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल थियो । एमालेले यसपालि ८ सीट गुमाउँदैछ । जसमध्ये निर्र्वाचनबाट १ सीट सुरक्षित राख्न सफल भएको छ । चुनावमा ७ सीट गुमाउँदा पनि एमाले नै राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल हुने भएको छ । अब राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग १७ सीट मात्रै हुन्छ ।राष्ट्रिय सभामा माओवादीको १४ सीट थियो । यसपटक उसको ४ सीट खाली हुँदैछ तर निर्वाचनबाट ५ सीटमा जीत निकालेको छ । अब राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसदको संख्या १५ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ७ सीट भएको कांग्रेसको यसपटक ३ सीट खाली हुँदैछ । कांग्रेसले ६ सीट जितेकाले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको १० सीट भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी ९एस० पार्टीको राष्ट्रिय सभामा ७ सिट थियो । यसपटक एसका ४ सांसद राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिनुपर्ने थियो । निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले ५ सिटमा जितेकाले राष्ट्रिय सभामा एसको ८ सीट भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा २ सीट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले निर्वाचनबाट १ सीट थपेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सीटसहित राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १ सीट र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्यमध्ये ३ जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।राष्ट्रिय सभाको यस पटकको निर्वाचनले सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेसलाई भएको छ । गठबन्धनमा भएको कारण कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा १० सीट पुर्‍याउन सफल भएको छ । कांग्रेस एक्लै चुनाव गएको भए राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस ३ सीटमा सीमित हुने अवस्था थियो । त्यसबाहेक माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले राष्ट्रिय सभामा यसअघिको भन्दा १र१ सीट बढी थप्न सफल भएका छन् । गठबन्धनमा भएकै कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएको छ । प्रतिनिधि सभामा जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल मात्रै सांसद छिन् ।